Famerenana famakiam-boky - Famoronana fitaovana mahomby
Fomba azo itokisana sy be mpitia ny tranonkalan'ny mpikaroka sy ny orinasa. Miezaha hanangona vaovao maro an-tserasera amin'ny tranonkala samihafa manerana ny aterineto. Androany no loharanom-baovao manan-danja indrindra amin'ny aterineto, ary maro ireo mpikaroka tranonkala no mampiasa izany isan'andro - el vino dei poeti prosecco. Python dia fiteny malaza sy mahomby. Mora ampiasaina izany, ary maro ireo mpikaroka webhotra no maniry azy ny manao asa haingana. Ohatra, raha mitady ny lisitra, ny vidiny, ny vokatra, ny tolotra ary ny angona hafa izy ireo dia mampiasa izany. Raha ny marina, dia manome fitaovana mahagaga ho an'ireo asa ireo i Python.
Ny tombontsoa amin'ny fampiasana Python
Mba hanatanterahana ny andraikiny, ny mpikaroka web dia manararaotra ny tahirin-tsakafo Python, izay ahafahan'izy ireo manaparitaka haingana ny tetikasa. Raha ny marina, izy io dia manolotra fomba tsotra ho an'ny mpampiasa azy mba hitady, hahita ary hanova ny angona nangonina ao anaty rakitra voafaritra ao amin'ny ordinaterany.
Ireo mpampiasa azy dia afaka mahita ny angon-drakitra azo tsapain-tanana ilainy amin'ny tranokala isan-karazany manerana ny tranonkala. Ankoatra izany, dia manome ny mpampiasa azy ny safidy hikarakarana ny tetikasany amin'ny fotoana iray ao anatin'ny iray andro. Izy io koa dia manolotra torolàlana momba ny fanodinana data.
Ny fianarana mametaka amin'ny python libraries dia asa mora, izay manolotra ireo mpampiasa azy mahagaga sy mahomby amin'ny fanamafisana ny zava-bitan'ny orinasany. Amin'ny fanaovana izany dia afaka manana fahatakarana mazava kokoa ny mpampiasa ny fomba fiasan'ny rafitr'ireo tranonkala manokana ireo. Ohatra, amin'ny hanaparitaka tranokala , dia mila 'mifampizara' amin'ny Internet (HTTP) izy ireo, amin'ny fampiasana Requests (tahiry Python). Avy eo, afaka mamerina ireo angona izy ireo ary tsy maintsy mamoaka azy ireo amin'ny HTML (amin'ny fampiasana lXML na Soupa tsara)
tranonkala manitsakitsaka asa tsotra ho an'ny mpikaroka web. Raha misy ny angon-drakitra diso rehetra ary manaisotra azy ireo ary manome ny mpampiasa azy. Manome ny toetra tsara izy io, izay manome anarana singa HTML, mba hanamafisany kokoa ny mpampiasa. Python dia fandaharana goavana, izay natao indrindra indrindra ho an'ny tetikasa toy ny tranonkala. Manome fomba tsotra ho an'ny mpampiasa azy izy io hanova ny mozika parse. Raha ny marina, ity programa amin'ny fiteny ity dia novolavolaina an-tampony amin'ireo parses tsara indrindra ao Python, tahaka ny lXML ary tena azo henoina. Raha ny marina dia mahita angon-drakitra izy ary manangona ireo fampahalalana rehetra ilaina amin'ny web ao anatin'ny minitra vitsy. Amin'ny ankapobeny, ny tranokala Lxml dia mamela ireo mpampiasa azy hamorona rafitra hazo amin'ny fampiasana XPath. Vokatr'izany dia afaka mamaritra mora foana ny lalana mankany amin'ilay singa izay misy fampahalalana manokana. Ohatra, raha te hisintona lohateny avy amin'ny tranonkala ny mpampiasa, mila mitady voalohany amin'ny inona ny singa HTML izy io ary avy eo dia mamoaka ny angona.